Unogona kundiratidza nzira yakanakisisa yekuwana kuwana backlinks itsva ye SEO?
Hapana chikonzero chekuti chivakwa chekubatanidza chava kunyanya kukosha mu Search Engine Optimization (SEO) kupfuura kare. Ndokusaka kuwana zvitsva zvakare - zvakasununguka uye zvemuviri - zvinotarisirwa kumunhu wese webmaster uye muridzi wepaiti anoda kuve nekufambira mberi kukuru muSEO, nemapurogiramu awo ari paIndaneti anoonekwa pakati pemigumisiro yepamusoro yekutsvaga. Ngatitarisei - kuwana zvitsva zvakare zvinoshandiswa kuti zvive nani pakusimudzira kuInternet kwete kungova kuvimba kwavo kana kufarirwa. Ndinoreva kuti chivakwa chekugadzirwa kwechimiro chechokwadi chinomirira kuunza kukosha kwechokwadi newebsite yako kana blog - pakupedzisira, kutungamira pamusoro pevakwikwidzana vekona uye kuita kuti purojekiti yako iwane kukoshesa, kutaurwa nekubatanidza ne - die perfekte wohnung finden. Saka, hapana chikonzero chekukurumidzira kunze kuedza kutora huwandu huwandu hweshure shure. Zvaizova zviri nani kwazvo kugadzirisa kusimbiswa kwehuhu hwavo uye hupenyu hwehupenyu - kutanga uye mberi. Kuita kudaro, rega ndikuratidze dzimwe nzira-nzira dzakaratidzwa dzekudzidza dzidzo itsva kumashure yakanakisisa nenzira yakakwanisa - pamwe nehupenyu hwako.
Chinyorwa chinoshamisa chinosunungura More Value
Pane chimwe chinhu, webhusaiti yega yega kana bhurogi inofanira kuva nehutano hweji yepamusoro inopa kukosha kwevateereri vanofarira vashandisi kana chinangwa chevangangodaro vatengi vanotarisirwa kuchinjwa kuva vashandi chaivo. Nenzira iyo, kunyanya mapeji ako ewebhu anogona kuonekwa neGoogle seanonyanya kufarirwa nehuwandu hwekutsvaga paIndaneti, pane dzimwe mawebsite kana mabloggi ane chokuita nekukurukura nyaya kana bhizimisi rimwechete rebhizimisi. Chii chinowedzera - kuwana mutsva backlinks ine chinhu chakasiyana-siyana uye yehuwandu hwehuwandu hunoreva kuti iwe uchabatsirwa kubva kune zvinyorwa zvemashoko, zvakare anozivikanwa seane simba zvikuru mu White-Hat SEO.
Kugutsikana nekugadzirisa uye kuonekwa
Funga kubatanidza chikamu chemashoko enyu (kana kuti zvinyanyisa zvakanyanya) mune imwe nzira yakanakisisa uye yakanyatsogadzirisa nzira dzekuona. Ndinoreva pano kuti iwe unorayirwa kuti usiye nguva yako mukusika maitiro akasiyana-siyana ezvinyorwa zvinogona kutarisirwa kukuunza iwe huru web traffic, uye kukwezva zvakanyanya kumashure panguva imwechete - inenge iri munzira inofambisa. Nenzira iyo, iwe zviri nani kutarisa pakusika kuratidzika kunonakidza kwepographics, spreadsheets, zvigadzirwa nehuwandu hwehuwandu hunogona kuramba huchikuvakirazve zvakanyanya shure kumashure.
Mumiriri weBloggging Anowedzera Simba Rako
Kuenderera kune vamwe vanobhururuka vanozivikanwa mu niche yako kana kuti vakakurudzira zvakakosha kubhizinesi rebhizimisi rako richiri nzira yakanaka kwete chete kuti uwane zvitsva zvitsva zvekare shure kwePrinceRank yakasimba kwazvo, asi kuti uzvivakire simba rako uye kuvimba pakati pevashandisi. Pakupedzisira - kuti uve mutungamiri wekutanga ruzivo ruzivo mubasa, saka uchitungamira nekuita iwe webhusaiti yako kana bhulogi kuti irege kubva pakutsvaga kutsvaga. Panguva imwe chete, zvisinei, usakanganwa kuti nguva dzose paunotumira mushumo wemhando yakanaka kune vamwe vanonamata mabhirigi - iwe uri kuwana zvakakodzerwa kumashure ekutungamirira vatenzi vakawanda vakavimbika pamapeji ako pachako. Ingova nechokwadi chokuti uri kunyora zvakanaka-inokumbira vatapi venyaya uye kungogombedzera mabhuku emashoko echinangwa chakanaka - uye wapedza!